﻿﻿ဒေါ်ရွှေကြည် နှင့် သူ၏ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းသို့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
My Dear Diary » ﻿﻿ဒေါ်ရွှေကြည် နှင့် သူ၏ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းသို့	12
﻿﻿ဒေါ်ရွှေကြည် နှင့် သူ၏ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းသို့
Posted by မြစပဲရိုး on Dec 2, 2015 in My Dear Diary | 12 comments
နီးများနီးလို့ ကတော့ အရောက်လာပါတယ် ရွှေကြည်လေးရယ်။
ထူးထူးခြားခြား တော့ မှာတမ်းမခြွေ လိုပါဘူး။
ကိုယ့်အနားမှာ ရောက်လာပြီ ဖြစ်တဲ့ သူကို အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း လို့ သာ တစ်သက်စာ သတ်မှတ်လိုက်ပေတော့။
အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း ဆိုတာ ချစ်သူ ရီးစား လင်ယောကျာင်္း ဆိုတာတွေထက် ကိုယ့်နှလုံးသား ကို ပိုပြီး နွေးထွေး လုံခြုံစေပါတယ်။
လူနှစ်ယောက် ကြား မှာ နားလည်မှု အခိုင်မာဆုံး က အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း ဆိုတဲ့ ဆက်ဆံရေးပါဘဲ။
အရီးရဲ့ ချစ်သော ရွှေကြည်လေး တို့ ဇနီးမောင်နှံ ပျော်ရွှင်သော၊ အောင်မြင်သော ဘဝ လေး တစ်ခု တည်ဆောက်နိုင်ကြမှာလို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
မြစပဲရိုး says: သီချင်း မဆိုရတာ ကြာလို့။ သီချင်း တစ်ပုဒ် ပါ။ :-))
Tim Mcgraw – My best friend Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3142
ဈာန်​ says: ရီးစားဘဝမှာအချစ်​ဆုံးဖြစ်​ခဲ့ကြသလို
အိမ်​​ထောင်​သည်​ဘဝမှာလည်း နားလည်​မှု အရှိဆုံးဖြစ်​ကြ​စေ​သော်​ …
ငုရင်ထရန် ဟုရန်မေ ရဲ့ ကိုကိုး says: မရွှေကြည်တို့ ဇနီးမောင်နှံ
ရာသက်ပန် ချစ်ခင်မြတ်နိုး တွယ်ကပ် ဟုတ်ပါဘူး တွယ်တာ ကြင်နာ ယုယ နိုင်ကြပါစေခင်ဗျား
ကျနော် မင်္ဂလာဆောင်ရင်တော့ ဆက်ဆက်ကြွခဲ့ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျား
ရမ်ကုမ် မှာ ဆောင်ရင်ကောင်းမလား ဆင်းစားနေပါတယ်ခင်ဗျား
ဇီဇီခင်ဇော် says: ချစ်ကြည်တည့်ရှုနေတဲ့ အချိန်မှာတော့ လင်မယားဆိုတာ သူစိမ်းတွေ ဆိုပေမဲ့ အနီးကပ်ဆုံးမဟုတ်ပါလားးး တွေး လျှာနဲ့သွား ကိုက်မိတဲ့ အချိန်မှာတော့ လင်မယားဆိုတာ အနီးကပ်ဆုံး ဆိုပေမဲ့လည်း သူစိမ်းတွေပါလား လို့ တွေးးပေါ့။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေခါမူ သက်ထက်ဆုံး ပျော်ရွှင်စွာ ပေါင်းရပါစေ။
အောင် မိုးသူ says: မိသားစုတိုင်းအဆင်ပြေချင်တယ်။ ချစ်တဲ့သူတိုင်း အဆင်ပြေစေချင်တယ်။ ကိုယ့်ရှေ့မှာ မပြေလည်တာတွေ တွေ့ရတော့ စိတ်တွေကုန်လို့။ ဘ၀လမ်းလေး ဖြောင့်ဖြူးပါစေလို့ စိတ်ရင်းနဲ့ ဆုတောင်းတယ်။
သျှားသက်မာန် says: ဆုတောင်းပေးပါတယ်…အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: ချစ်​ကြည်​တို့ဘဝသာယာ​ဖြောင့်​ဖြူးပါ​စေ အရီးနဲ့အတူဆု​တောင်း​မေတ္တာပို့
Mike says: .မင်္ဂလာဆောင်မသွားဖြစ်လိုက်ပေမဲ့ .သွားဖြစ်ခဲ့တဲ့ရွာသူားတွေပုံတွေကြည့်ပြီးအပျော်တွေကူးစက်ခံစားရပါတယ်
.မရွှေကြည်တို့ဇနီးမောင်နှံလည်းသက်ထက်ဆုံး ပျော်ရွှင်စွာ ပေါင်းရပါစေ။
Alinsett @ Maung Thura says: သိပ်လိုက်ဖက်တဲ့ စုံတွဲအတွက်… သိပ်လှတဲ့ လက်ဆောင်….
Wow says: ဟိုတစ်လောကတင် သတ်မယ်ဆိုလား ဖြတ်ပစ်မယ်ဆိုလားးးးးး ဟီးးးး ချစ်ညီမလေးတို့ ဇနီးမောင်နှံ အမြဲတမ်းပျော်ရွင်ချမ်းမြေ့ပါစေ…
အောင် မိုးသူ says: အမြဲတမ်း စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာပါစေဗျာ
kai says: မလိမ်နဲ့.. မလိမ်စေနဲ့…
အဲလိုဆို.. အိုအောင်မင်းအောင်မပေါင်းရရင်.. ကြိုက်သလိုလာပြော….။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.